ひろしま留学大使 インタビューvol.5 Nu Nu Mai - ひろしま留学大使｜HIROSHIMA Study Abroad Ambassador
ミャンマー　→　東広島市
Chyeju hte naw shachyen ya rit.
Ngai na mying gaw Nu Nu Mai re. Mai ngu ai gaw jinghpaw ga hku ninghkaw jan ngu ai lachyum re. Kachin ngu ai gaw Myen mungamyu lakung kaba matsat kaw nna langai mi re. Ngai gaw first year master course hpe Hiroshima Dakkasu kaw lung taw nga ai re. Myitshang sha ai lam law kaw nna langai mi gaw ningnan hpe sawk sagawn hkaja ai hpe myitlawm nngai. Ga shadawn nga yang, nbung-jawng jawn gumhtawn ai zawn re ai lam re. Bai nna, langai mi gaw, Japan ga mahkum madup ni hpe laika ka nna garan kachyan na hpe mung myit lawm nngai.
ကျွန်မနာမည်က နူးနူးမိုင်ပါ။ မိုင်ဆိုတာက နေရောင်ခြည်လို့ ကချင်လို အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကချင်ဆိုတာကတော့ မြန်မာရဲ့ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုကြီး (၈)မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC) ၊ ဟီရိုရှီးမားတက္ကသိုလ်မှာ မဟာတန်း၊ ပထမနှစ်တက်နေတာပါ။ ၀ါသနာအများကြီးထဲက တစ်ခုကတော့ အသစ်တစ်ခုခုကို လုပ်ရတာမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေလေ့လာရတာမျိုးကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တောင်ပေါ်ကနေလေထီးခုန်ချရတာမျိုးပေါ့။ ဒီမှာ သင်ယူခဲ့သမျှကို ပြန်လည်ရေးသားပြီး မျှဝေရတာမျိုးကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။
Since I saw HSAA announcement in my momiji account, I was very interested in it and eager to apply it. At first, I hesitated to apply because I worry that it sounds so serious (the word ambassador). But, later, I applied to HSAA because one of my best friends encouraged me to join, and also after I’ve read HSAA criteria, I felt that the style of HSAA is matching to my personalities. Why I felt like this is that I usually write and share my student life in Japan by posting notes on my Facebook wall and I also keep telling and encouraging my friends to try to come and study here. One more thing is that I love to do those kind of social and cultural exchange activities.
Hpa majaw Hiroshima Study Abroad Ambassador (HSAA) Hiroshima Jawngma hkringmang kasa hpe shawk shawn ai ta?
Ndai HSAA shaga ai laika hpe mu ai kaw nna grai myit shangsha nna, shawk na matu myit grai katu ai re. Raitim, Ambassador ngu ai gasi hpe kajawng nna shawk na matu loi hkrit nna hting nut mat shi ni ai. Raitim, manang ni ngai hpe n-gun jaw ai majaw, bai ngai nan mung HSAAashadawn shadang hte ngai na lailen htuk nga ai hpe mu lu ai majaw shawk dat ai re. Ngai nan mung Japan ga dakkasu jawngma prat hpe tsun dan ka dan dingyang galaw taw ai jan re. Ya tim manang ni hpe ndai kaw jawng sa lung na matu dingyang n-gun jaw let shaga nga dingyang re. Bai langai mi gaw, ngai nan ndai zawn shawa bungli hte htunghkring shachyen bungli ni hpe myitshang sha ai jan re ai majaw mung re.
၂။ ဘာဖြစ်လို့ HSAA ကိုလျှောက်ခဲ့သလဲ။
ကြေငြာစာစတွေ့ကတည်းက အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားပြီး လျှောက်ဖို့စိတ်ပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သံတမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လန့်ပြီး လျှောက်ဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့မိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းကအားပေးတယ်ရယ်၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီက စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်လို့ ခံစားခဲ့မိတာရယ်ကြောင့် လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ကိုက်ညီတယ်လို့ ခံစားမိရတာလည်းဆိုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ရတဲ့ဘ၀ကို ကျွန်မ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးတင်လေ့ရှိလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဒီလိုမျိုး လူမှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုလေးတွေကို နှစ်သက်တတ်လို့ပါပဲ။
Actually, I couldn’t choose. I have been chosen. Initially, this process began from one of my professors from Myanmar. She referred me to my Sensei (my academic supervisor in Japan), because she knew my research interests. (She was also one of the graduate students from Hiroshima University.) Then, I prepared and applied for it. After I passed through all the long procedures of applying for both university and scholarship, I got accepted from both.
Hpa na Hiroshima kaw na dakkasu hpe lata ai rai?
Teng shat tsun ga nga yang, ngai la ta ai n re. Lata la hkum ai she re. Shawng ningnan hpang wa ai gaw, myen mung kaw na ngai sarama kaba langai, ngai hpe ya ndai kaw na sara hte shachyen ya ai kaw nna hpang wa ai ga re. Sarama shi nan mung ndai kaw na jawng ngut ai jan re. Shi shachyen ya ngut ai hpang kaw nna ngai hkyen lajang hpang wa, shawk hpang wa ai re. Ninggam law law hpe tawt lai ngut ai hpang, ndai dakkasu shang na ahkang hte Japan Atsu yaajawng jarik madi shadaw ai lam hpe hkap la hkrum nna ndai kaw du wa ai re.
၃။ ဘာဖြစ်လို့ ဟီရိုရှီးမားက တက္ကသိုလ်ကိုရွေးခဲ့ရတာလဲ။
တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မက မရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူး။ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ မြန်မာပြည်က ကျွန်မရဲ့ပါမောက္ခဆရာမကြီးတစ်ဦးမှ ယခု လက်ရှိ စာတမ်းကြီးကြပ်သူဆရာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာကနေ စခဲ့တာပါ။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း ဒီကနေ ကျောင်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျွန်မရဲ့ သုတေတန စိတ်ဝင်စားမှုနယ်ပယ်ကိုလည်း သိပြီးသားဖြစ်နေလို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်ကနေစပြီး ကျွန်မ လျှောက်ဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆင့်တွေအများကြီးကျော်ဖြတ်လာပြီး၊ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရော စကောလားရှစ်ပါ ရခဲ့ပါတယ်။
In Hiroshima, which places do you like most?
The place that I like the most is my campus because the atmosphere is very beautiful and peaceful for studying. While I was in Myanmar, one of my dreams was to be able to study and read books at beautiful and peaceful place where colorful flowers and trees are surrounding by me like I am reading books lying on the grasses of Pyin Oo Lwin Park, that is the most popular park in Myanmar. Let say, now I am in my dream land.
The next place I like the most is the Hiroshima city. Because even Hiroshima itself had experienced once unforgettable misery moment in the past, now, today it is standing as the symbol of peace. As Hiroshima is very famous about atomic bomb location, so every time I go to the historic remains of atomic bomb blast, it reminds me on how bad the effects of war are and I wish there will be no more wars in this world. I also like Miyajima very much because it is so beautiful, and, there isamagical feeling that makes me always want to go there. I also like cherry blossom in Hiroshima very much. I feel like I’m living in fairy tale or paradise because it is so blissful.
Hiroshima hta ra sharawng dik shara ni gaw kara ni ta?
Ngai ra dik ai shara gaw ya ngai jawng lung nga ai Hiroshima dakkasu jawng wang nan re. Hpa na nga yang, grai tsawm, grai simsa ai shingwang shi kaw nga ai majaw re. Ngai myen mung kaw nga ai shaloi na, ngai na yup mang langai mi gaw, asim asa re shara, hpun ni, nampu nampan ni hte shinggrup da ai shara, tsawm htap ai shara kaw hpaji grai hkaja mayu ai yup mang re. Ga shadawn, Pyin Oo Lwin nampan sun na tsingdu pa kaw laika sa dung hti ai zawn re. Ya gaw dai yup mang kang sai ga re. Dai majaw ndai dakkasu shingwang hpe ra dik re.
Bai kaga langai mi gaw Hiroshima Myo re. Hpana nga jang, Hiroshima shinan moi laiwa sai ten hta malap n mai ai yawn hpa hpe hkum kadut wa tim, ya daini Hiroshima gaw mungkan hta simsa kumla laingai hku tsap dan taw sai majaw re. Hiroshima gaw nuclear bawm jahkat hkum ai shara hku nna mungkan kaw grai myin gumhkawng ai shara re. Ngai dai shara de du shagu, majanamajaw hkum hkra ai n kaja ai lam ni hpe myitdum shingran ni nngai. Mungkan ga ntsa majan ngu galoi n nga mat sanu ga ngu mung ngai myit hta kyu hpyi myit dum dat nngai. Bai nna, ngai Miyajima hpe mung ra nngai. Jahking hkring bai sa chyai na zawn re tsawm la ai shara nan re. Bai nna Hiroshima kaw cherry pu ten nampan pu yu ai hpe mung grai ra sharawng nngai. Dai ten hta nampan hpun ni yawng pu tsawm ai kata kaw, hpun npu kaw, hkawm chyai ai gaw sumsing du ai zawn ngu hkam sha shangun ai majaw re.
၄။ ဟီရိုရှီးမားမှာ အနှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုပြောပြပေးပါ။
အနှစ်သက်ဆုံးနေရာကတော့ တက္ကလိုလ်ဝင်းလေးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အင်မတန်မှလှပပြီး စာပေလေ့လာဖို့ အင်မတန်မှ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတုန်းက ကျွန်မမှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အေးအေးဆေးဆေး၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း၊ သစ်ပင်ပန်းမံတွေခြံရံထားတဲ့နေရာမျိုးလေးမှာ စာဖတ်၊စာလေ့လာနိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့အိပ်မက်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြင်ဦးလွင်အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ရဲ့ မြက်ခင်းပေါ် စာဖတ်နေရသလိုမျိုးပေါ့။ အခုတော့ ကျွန်မရဲ့အိပ်မက်ပြည့်စုံနေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
နောက်တနေရာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ဟီရိုရှီးမားမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဟီရိုရှီးမားသူကိုယ်၌က မေ့လို့မရနိုင်မယ့် ၀မ်းနည်းပူဆွေးစရာအခိုက်အတန့်ကို တချိန်တခါတုန်းကကြုံကြိုက်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီကနေ့မှာတော့ ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခု အနေနဲ့ရပ်တည်နေတာကို မြင်ရလို့ပါ။ ဟီရိုရှီးမားက နြူးကလီးယားဗုံးဒဏ်ကြောင့် အင်မတန်မှ နာမည်ကြီးပါတယ်။ အဲဒီကိုရောက်သွားတိုင်း စစ်ပွဲရဲ့ အကျိုးဆက်တွေဟာ ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးသလဲဆိုတာကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်မိစေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ နောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေမရှိပါစေနဲ့တော့လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့မိပါတယ်။
နောက်တနေရာကတော့ မီယာဂျီးမားကို အရမ်းလှလို့ သဘောကျပါတယ်။ နောက်ထပ် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ သွားချင်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးလေး ပေးနိုင်တဲ့နေရာလေးမို့လို့ပါ။ ပြီးတော့ ဟီရိုရှီးမားရဲ့ ချယ်ရီပန်းပွင့်တဲ့ အချိန်လေးကိုလည်း အင်မတန်မှနှစ်ခြိုက်သဘောကျမိပါတယ်။ နတ်သမီးပုံပြင်ထဲရောက်သွားသလိုလို၊ သုခဘုံထဲပဲ ရောက်သွားသလိုမျိုး ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရစေလို့ပါပဲ။
Please giveamessage to foreign students who think to study in Japan.
Don’t worry too much, just come here. Just come out of your comfort zone. Be ready with research proposal and TOEFL score, then you can start to apply to Japan. Of course, let me recommend you to apply to Hiroshima University because it isavery peaceful and comfortable place for studying and concentrating in your research. You don’t need to worry about your Japanese skill because all the professors in IDEC teach us in English. So, you don’t need to worry about your academic life. However, for daily life, I recommend you to study little by little Japanese language because it will help youalot. Japanese are very kind and very helpful, whenever you ask forahelp they are happy to help you as much as they can. After you arrived in Japan, please, don’t lock yourself in your room. Learn the culture and try to interact with the local and other people. Explore as much as you can and participate in many activities as you can. Then, you will learn what you can’t learn from the books. Go outside! Enjoy your life! Have fun as much as you can!
Chyeju hte ndai kaw jawng sa lung na jawng ma ni hpe numhtet ga naw tsun ya rit.
Nau hkum tsang! Sa sha sa wa ma rit. Pru wa rit. Lata kaw galaw na research shawk shawn laika hte English TOFEL amat ni shajin tawn da, lang da u. Dai hpang gaw Japan ga na gara dakkasu kaw tim mai shawk sai re. Japan ga de sa wa jang Hiroshima dakkasu kaw sa lung na hpe saw shajin mayu nngai. Hpa majaw nga yang ndai dakkasu gaw hpaji hkaja na matu grai simsa shimlum, ngui pyaw, tsawm htap ai shara re majaw re.
Bai nna, nang Japan ga n chye tim hpa n tsang ra ai re. Hpa majaw nga yang, ndai kaw na sara ni English hku sharin ya ma ai re. Raitim, jawng shinggan, shani shagu pratamatu gaw Japan ga loi li sharin da na hpe mung shadum mayu nngai. Japan ga chye da ai gaw grai akyu nga ai majaw re.
Japan ni gaw myit kaja nna grai karum kam ai masha ni re. Nang lama wa karum hpyi dat jang, mai byin hkra ngut hkra karum ai masha ni re ma ai. Ndai kaw du ai hpang gaw, chyeju the nang hkrai gawk kaw hkum makoi nga. Shinggan de pru yu u. Masha niahtunghkirng lailen ni hpe hkaja u. Masha myu ni hte kanawn mazum yu u. Mai byin ai made sawk sagawn u. Shawng lawm u. Dai shaloi, nang mu wa chye wa na ra ai. Shinggan pru u. Pyaw hkra nga u, ngu n-gun jaw ga tsun mayu nngai. Chyeju kaba sai!
၅။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဂျပန်ပြည်ကို ကျောင်းလာတက်မယ့် ကျောင်းသားတွေကို အမှာစကားလေးပါးပေးပါဦး။
အရမ်းကြီး မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့။ လာသာလာခဲ့လိုက်ပါ။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့စက်ဝန်းထဲကနေသာ ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါ။ လက်ထဲမှာ သုတေသနအဆိုပြုလွှာရယ် TOEFL အမှတ်ရယ် ရှိထားပြီဆိုရင် ဂျပန်ကိုလာဖို့ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မကတော့ ဟီရိုရှီးမားတက္ကသိုလ်ကိုလာဖို့ မှတ်ချက်ပေးပါရစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သုတေသနနှင့် စာလုပ်ဖို့ အင်မတန်မှ အေးချမ်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့နေရာလေးမို့လို့ပါ။ ဂျပန်စကားအတွက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေအားလုံးက အင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပညာရေးအတွက်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘ၀အတွက်တော့ ဂျပန်စကားနည်းနည်းချင်းစီလေ့လာသွားဖို့ မှာချင်ပါတယ်။ ဒါကနေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘ၀ကို အများကြီး အထောက်အကူပြုလို့ပါ။ ဂျပန်တွေက အင်မတန်မှ ကြင်နာပြီးကူညီတတ်ကြပါတယ်။ အကူအညီလိုနေတဲ့အချိန်တိုင်း ကူညီပေးဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ တကယ်လို့ ဂျပန်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး အခန်းထဲမှာပဲအောင်းမနေပါနဲ့။ ဒီကယဉ်ကျေးမှုကို သင်ယူပါ၊ ဒေသခံတွေ၊ တခြားလူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ စူးစမ်းလေ့လာပါ၊ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမှာလည်း ပါဝင်ပေးပါ။ အဲဒီအခါ စာအုပ်ထဲမပါတဲ့ ပညာတွေကို သင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အပြင်ထွက်ပါ။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင်နေပါ။
tagPlaceholderカテゴリ： hsaa, interview, nunumai